Sanbaloolshe oo tartan adag la galaya Fahad iyo Farmaajo | KEYDMEDIA ENGLISH
Sanbaloolshe oo tartan adag la galaya Fahad iyo Farmaajo
Agaasimihii hore ee hay’adda Nabad-sugidda, Ambaasadoor, Cabdullaahi Maxamed Cali [Sanbaloolshe] wuxuu ka mid ahaa, siyaasiyiin mabda’oodu sugnaa, mowqif cadna ka lahaa, xaaladdii dalka ee afartii sano ee na-weydaaratay.
BALADWEYNE, Soomaaliya - Kursi kale oo tartankiisu adag yahay, ayaa maanta la filaya in doorashadiisu ka dhacdo, magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, kaasoo ay ku tartamayaan ugu yaraan todobo musharrax oo ay ku jiraan Madaxweynihii hore ee Hirshabeelle, Cosoble iyo Taliyihii hore ee NISA, Sanbaloolshe.
Kursiga HOP#058, oo ay ku suntan tahay beesha Cali Madaxweyene, waxaa shahaadada musharraxnimo u qaatay, Ambaasadoor, Cabdullaahi Maxamed Cali, Ubax Cali Sheegow, Cabdullaahi Axmed Xuseen,Maxamuud Af-dhuub Makaraan, Cabdulqaadir Xuseen Colow, Cali Cabdullaahi Cosoble iyo Yoonis Maxamed Nuur.
Tartanka kursigaan, waxaa ka haray, Nuur Iidow Bayle, oo ku fadhiyay Baarlamaankii 10-aad, kadib markii ay u cadaatay inuu mari doono jidkii ay qaadeen shaqsiyaadkii u adeegayay Farmaajo, oo intooda badan ku soo jabay Baladweyne, hayeeshee, Madaxtoyada ayaa gadaal ka riixeysa Cabdulqaadir Xuseen Colow.
Sida ay Keydmedia Online, ka ogaatay guuxa shacabka Hiiraan iyo guud ahaan dadka is-baddel doonka ah, kursigaan, wuxa ay bulshadu la doonayaan Cabdullaahi Sanbaloolshe, kaas oo isagoo aan xil heyn, afartii sano ee la soo dhaafay u taagnaa difaaca shacabka iyo in dalka laga badbaadiyo gacmaha Fahad iyo Farmaajo.
Agaasimihii hore ee hay’adda Nabad-sugidda, oo ka mid ahaa, siyaasiyiin mabda’oodu sugnaa, mowqif cadna ka lahaa, xaaladdii dalka ee afartii sano ee na-weydaaratay, ayay shacabku, la meel-dhigayaan, shaqsiyaad qaddiyad adag lahaa muddo xileedkii hore kuwaas oo intooda badan ka soo baxay Galmudug.
Soo bixitaanka Sanbaloolshe, waxaa si weyn uga soo horjeeda Farmaajo, wuxuuna lacag ku bixinayaan, sidii uu kursiga ugu fariisan lahaa Colow, oo adeege u ah. Su’aasha ayaa ah, “Ergada dooraneysa Kursiga HOP#058, ma waxa ay dooran doonaan qof si rasmi ah u matala mise shaqsi sidii Iidow, Fahad la hoos galaya”?
Cabdullaahi Maxamed Cali [Sanbaloolshe], wuxuu horay u soo noqday Wasiirkii Amniga Qaranka ee Dowladdii KMG ahayd, halka uu mar soo noqday, Safiirka Soomaaliya ee Boqortooyada Ingiriiska, wuxuuna labo mar soo maray xilka ugu sarreeya Nabad-sugidda ee agaasimaha NISA, Xildhibaan ayuu sidoo kale oo noqday.
Sanbaloolshe, wuxuu aad ugu dhow yahay Madaxwynihii hore, Xasan Sheekh Maxamuud, halka uu galangal xooggan ku leeyahay inta badan siyaasiyiinta mucaaradka, gaar ahaan MW Shariif, Ra’iisul Wasaare Kheyre iyo Hoggaamiye CC Warsame, wuxuuna heli karaa garab maaliyadeed oo dhameystiran, sida xoguhu sheegayan.